Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) - Hello Sayarwon
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်)
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Calcium Sandoz® ကို သွေးတွင်း ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်နည်းပါးခြင်း (ကြွက်တက်ခြင်း နဲ့ အခြားသော ကြွက်သားပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်)၊ ကာလရှည် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်း၊အရိုးပျော့ခြင်း၊အရိုးပွခြင်း၊အူလမ်းကြောင်းမှ အစာစုပ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိသူများကို ကုသရန် အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့အပြင် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဝေဒနာများကို ကုသခြင်း၊သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏ အလွန်များပြားခြင်း၊ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း၊ဖလူရွိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်းတို့ကို ကုသတဲ့နေရာမှာလည်း အခြားသော ဆေးတွေနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဖြေးညင်းစွာ ထိုးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး (၁၀ စီစီကို သုံးမိနစ်လောက်ကြာအောင် ထိုးရပါမယ်) ဆေးသွင်းနေချိန်မှာ နှလုံးခုန်နှုန်းပုံစံမှန်မမှန်ကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။ အသားဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ တင်ပါးကြွက်သားထဲကို ခပ်နက်နက်ထိုးစိုက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။Medication ကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် မသုံးစွဲရပါဘူး။
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Calcium Sandoz® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Calcium Sandoz® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Calcium Sandoz® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Calcium Sandoz® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Calcium Sandoz® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာတွေ ရှိရင် ဆေးမသုံးစွဲခင်မှာ ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။digitalis ဒါမှမဟုတ် adrenaline သုံးစွဲနေရသူတွေမှာ ဒီဆေးကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် လုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူး။ ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏ များများစားစားကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သွေး နဲ့ ဆီးထဲမှာရှိတဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏကို အနီးကပ် တိုင်းတာစစ်ဆေးနေရမှာဖြစ်ပြီး (အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာပေါ့) သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏ 2.625 mmol (105-110 mg/l) ထက် ပိုများရင် ဒါမှမဟုတ် ၂၄နာရီအတွင်း ကယ်လ်ဆီယမ်ကို ဆီးကတဆင့် စွန့်ထုတ်မှုဟာ 0.125 mmol (5 mg/kg) ထက် များတယ်ဆိုရင် ဆေးသွင်းနေ ခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရပါမယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်များပြားလွန်းရင် နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် နှလုံးဆီကို ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏ အများအပြား ရောက်ရှိမသွားဖို့ အထူးပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ် အလွန်အမင်းမြင့်တက်ခြင်းကို ကုသဖို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ် အကြောသွင်းဆေးပေးနေချိန်မှာ အီးစီဂျီစက်ကို အသုံးပြုပြီး တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Calcium-Sandoz အပါအဝင် ကယ်လ်ဆီယမ်ထိုးဆေးတွေမှာ အလူမီနီယမ်ပမာဏလည်း အနည်းငယ် ပါဝင်ပါသေးတယ် (5 mg/l လောက်အထိ ပါဝင်ပါတယ်)။ ဒါကြောင့် မွေးကင်းစကလေးတွေ၊ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကျောက်ကပ်ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်စီးနေသူတွေမှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ထိုးဆေးကို ကာလရှည်သုံးစွဲခြင်းဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွင်း အလူမီနီယမ်ဓါတ်စုပုံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေကာ အရိုးနဲ့ ကြွက်သားပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ၊အာရုံကြောနဲ့ သွေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဦးတည်စေတဲ့အတွက် အဆိုပါ လူနာတွေမှာ ကာလရှည်အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Calcium Sandoz® ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
နေရထိုင်ရသည်မှာ သက်တောင့်သက်သာ မရှိသလို ခံစားရခြင်း။
ကယ်လ်ဆီယမ် သို့မဟုတ် မြေဖြူကဲ့သို့သော အရသာရခြင်း။
ရင်တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်ခြင်း၊ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calcium Sandoz® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Digitalis glycosides အမျိုးအစား ဆေးများ : Digitalis glycosides ရဲ့ နှလုံးအပေါ် သက်ရောက်တဲ့ အာနိသင်ကို ကယ်လ်ဆီယမ်က ပိုလာစေပါတယ်။verapamil နဲ့ အခြားသော ကယ်လ်စီယမ် ဆန့်ကျင်တဲ့ဆေးတွေအပေါ် ခန္ဓါကိုယ်က တုံ့ပြန်မှုကို လျော့နည်းစေပါလိမ့်မယ်။
Thiazide အမျိုးအစား ဆီးဆေးများ :Thiazide အမျိုးအစား ဆီးဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်က ပြန်လည်စုပ်ယူမှုများပြားခြင်း ဒါမှမဟုတ် အရိုးဆဲလ်တွေကနေ စွန့်ထုတ်မှု များခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ် ပမာဏ များပြားခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ သုံးစွဲလိုက်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်က မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Atenolol : ကယ်လ်ဆီယမ်ဟာ Atenolol ရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Sodium polystyrene sulfonate : ကျောက်ကပ်မကောင်းသူတွေမှာ Sodium polystyrene sulfonate နဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်တို့ကို ပူးတွဲသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် metabolic alkalosis လို့ခေါ်တဲ့ သွေးတွင်း အယ်လ်ကာလီဓါတ်များပြားတဲ့ အခြေအနေတခုကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး resin ဓါတ်ရဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ ပေါင်းနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေး/ဓါတ်ခွဲခန်း တွင် စစ်ဆေးမှုများနှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း : ကယ်လ်ဆီယမ်အကြောသွင်းဆေးကို အသုံးပြုတဲ့အခါ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ 11-hydroxycoticosteroid ပမာဏကို ခေတ္တများစေမှာဖြစ်ပြီး တနာရီလောက်ကြာရင်တော့ မူလပမာဏ ပြန်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Calcium Sandoz® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calcium Sandoz® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိနေခဲ့ရင်ပေါ့။
သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏများပြားခြင်း၊ဆီးထဲတွင် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်များ များပြားစွာ ပါရှိခြင်း (ဥပမာ ပါရာသိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ခြင်း၊plasmocytomas ကဲ့သို့သော ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်များကို သွေးထဲရောက်ရှိစေသော ကင်ဆာများ၊အခြားနေရာမှ ကင်ဆာဆဲလ်များ အရိုးသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အရိုးပွခြင်း စသည်)။
ကျောက်ကပ် ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးခြင်း။
သွေးတွင်း galactose ပမာဏ မြင့်တက်ခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ : တခါထိုးလျှင် ၁၀ စီစီပမာဏကို အကြောသွင်းဆေး သို့မဟုတ် အသားထိုးဆေးအဖြစ် ထိုးပေးနိုင်ပြီး တနေ့လျှင် တကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ထိ နေ့စဉ်ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရည်ကို ခန္ဓါကိုယ်အပူချိန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ဦးစွာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖြည်းညင်းစွာ ထိုးသွင်းရပါမယ် (0.5-2 ml/min)။ လူနာက နေရထိုင်ရ တခုခုအဆင်မပြေဖြစ်လာရင် ဆေးထိုးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ရမှာဖြစ်ပြီး လက္ခဏာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားရင် ပြန်လည်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးပြီး ခဏလောက်တော့ လှဲလျောင်းနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်ကို ခန္ဓါကိုယ်က လျင်မြန်စွာ စွန့်ပစ်လေ့ရှိတာကြောင့် ထပ်ခါတလဲလဲသွင်းပေးဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏ အလွန်အမင်းကျဆင်းနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ အကြောဆေးချိတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် (ကလေးရော လူကြီးမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်)။ သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏနဲ့ ဆီးထဲမှာစွန့်ပစ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏတို့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကို တွက်ထုတ်ရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ : ၅ – ၁၀ စီစီ ပမာဏကို တနေ့လျှင်တကြိမ် အကြောဆေးအဖြစ် နေ့စဉ်ထိုးပေးရပါမယ်။ သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ် ပြင်းထန်စွာ ချို့တဲ့နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန် တကီလိုတိုင်းအတွက် ၄၀ – ၈၀ မီလီဂရမ် ကယ်လ်ဆီယမ် (ထိုးဆေးအဖြစ် ၄ – ၉ စီစီ) ကို ၂၄နာရီခြားတခါ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အများဆုံး သုံးရက်အထိ ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဗီတာမင် ဒီလည်း တွဲဖက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသွင်းနေချိန်မှာ သွေးခုန်နှုန်းကို တောက်လျှောက်တိုင်းတာနေရမှာဖြစ်ပြီး နှလုံးခုန်နှေးသွားပြီဆိုတာနဲ့ အကြောဆေးသွင်းနေခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောဆေးသွင်းပြီးနောက်မှာ လိုအပ်သေးရင် ကယ်လ်ဆီယမ်ဆေးပြားတွေကို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Calcium Sandoz Injectable (ကယ်လ်ဆီယမ် ဆန်ဒိုစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Calcium Sandoz® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် Sandoz® ထိုးဆေး ၁၀ စီစီ။
Calcium Sandoz® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
CALCIUM SANDOZ® INJECTION INJ.
ndoz%20inj%20inj. Accessed December 4th, 2016